नेपाल आएयता सबैभन्दा पहिला उनले आफ्नो प्रमुख उद्देश्य नेपाललाई ट्वान्टी–२० विश्वकपमा छनोट गराउनु रहेको बताएका थिए । जति बेला नेपाल त्यसमा छनोट हुन सकेन्, उनले उल्टै प्रश्न गरेका थिए– नेपाल सायद त्यहाँसम्म पुग्न योग्य थिएन कि ! उनलाई नेपालको प्रशिक्षक नियुक्त गर्नुमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आईसीसी) को सबैभन्दा बढी निर्णायक भूमिका थियो ।
पटवालले खासमा छोड्नुको प्रमुख कारण भने अलग्गै थियो र सम्भवत: यही कारणले उनले राम्रोसँग काम नगरेको पनि हुनसक्छ । क्यान प्रतिबन्धबाट गुज्रिरहेको स्थितिमा उनले प्रशिक्षक पदको नियुक्त पाएका थिए । उनको तलब थियो, महिनाको नौ हजार डलरको हाराहारीमा ।उनको तलब आईसीसीले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा पठाउने गथ्र्यो । परिषद्ले कर काटेर उनलाई तलब दिने गरेको थियो । पटवालको आपत्ति परिषद्ले कर भनेर धेरै रकम काट्यो भन्नेमै थियो ।
खासमा प्रशिक्षकको तलबबारे विवाद यसअघि नै सुरु भइसकेको थियो, दसानायेकेकै प्रभावमा । उनी प्रतिमहिना आठ हजार डलरको हाराहारीमा तलब थाप्थे । त्यो बेलाको क्यानले यो रकम धेरै भयो, हामीले दिन सक्दैनौं भन्यो । यस्तोमा नेपाल सरकार नै अगाडि आएर उनको तलब आपैंmले दिने गरेको थियो । यो काम तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले गरेका थिए । त्यही बेला अन्य खेलका सरोकारवालाले क्रिकेटमै मात्र किन विदेशी प्रशिक्षकलाई तलब सरकारले दिनुपर्‍यो भनेर पनि प्रश्न उठाए ।